ဆိုက်လမ်းညွန် « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
wordpress မှ blogspot သို့ ပြောင်းချင်ရင်
ကျွန်တော်တို့ Blogpsot သမားတွေ WordPress ကို ပြောင်းချင်ရင် လွယ်ပါတယ် WordPress Login ထဲကနေ သင့်ဘလော့ထဲ ဝင်ပြီး Dashboard ထဲက Tools tab အောက်က Import ထဲဝင်ပြီး Blogger ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပြီးရင် ကိုယ့်ဘလော့ထဲက ပိုစ့်တွေ ကွန်မန့် တွေကို အကုန်လုံး ကိုယ့်ရဲ့ WordPress ဘလော့ အသစ်ကို ပြောင်းတင်လို့ ရပါတယ်..။
အဲ တစ်ကယ်လို့ သင်က WordPress နဲ့ ဘလော့ဂ် ဂင်းရတာ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး ဆိုပါစို့ ကိုယ်ပိုင် ဟော့စတင်း နဲ့ လုပ်ရတာ အလုပ်ရှုပ်တယ် ဖရီး ရတဲ့ Blogspot နဲ့ပဲ လုပ်ချင်တယ် ဆိုပြီး wordpress ကနေ Export ဖိုင်လုပ်ပြီး ဘလော့စပေါ့ မှာ ပြန်တင်ဖို့ ကြိုးစားရင် လုံးဝ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး…၊
ဒီတော့ WordPress မှာပဲ ဆက်ပြီး ဘလော့ဂင်းရတော့မှာလား ?????
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ မိတ်ဆွေ ဒီလို လူမျိုးတွေ အတွက် ကူညီပေးမယ့် ဆိုဒ်လေး တစ်ခု ညွှန်ပြပါရစေ…၊
ဒီအောက်က အဆင့်တွေ အတိုင်း လုပ်သွားရင် WordPress ကနေ Blogspot ကို ပြန်ပြောင်း နိုင်မှာပါ..၊
၁)Wordpress admin login ထဲ ဝင်လိုက်ပါ..ဒါဆို Dashboard ကိုရောက်သွားပါမယ်
၂)Tools tab အောက်က Export ကို ဆက်သွားပါ download export file ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး XML ဖိုင်ကို သင့်ကွန်ပြူတာထဲ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါ..၊
၃)ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ လင့်မှာ ရှိတဲ့ နံပါတ်(၆) နေရာက Browse ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ခုနက wordpress က ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင်တော့ Convert ဆိုတာလေး နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ..ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ WordPress က Export file ကို Blogger export file အဖြစ်ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်..၊
၄)အဲဒီပြောင်းလိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းပေးလိုက်ပါ(Example:WordPress inaBlogger export file) ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..၊
၅)ပြီးရင်တော့ http://www.blogger.com/home ကနေ ကိုယ့်ဘလော့ဂ် ထဲ ဝင်ပြီး Setting>>Basic ထဲက Import blog ကိုနှိပ်ပြီး ခုနက Convert လုပ်ပြီးရလာတဲ့ ဖိုင်လေးကို Inport လုပ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် WordPress Blog က ပိုစ့်တွေ ကွန်မန့်တွေ အကုန်လုံး Blogspot Blog မှာ ရောက်လာပြီး Blogspot နဲ့ ဆက်ပြီး ဘလော့ဂင်းလို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်..။
Wordpress blog မှ Blogspot သို့ပြောင်းလိုသူများ ဤလင့်မှ တစ်ဆင့်သွားပြောင်းလိုက်ပါ..။
move your WordPress blogs over to Blogger
http://mglhulin.blogspot.com/ black computer
ဓါတ်ပုံ၊ ဖက်ရှင်၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ဂရပ်ဖစ်စ်
စင်္ကာပူတစ်ဝှမ်းမှ အလှပုံများရယူခံစားနိုင်ပြီး၊ မိမိ၏ထူးခြားသောလက်ရာပုံများပေးပို့ကာ ပညာရှင်အခငွေရယူနိုင်သည်။
ရှားပါသောဓါတ်ပုံများ ရယူနိုင်ပြီး မိမိ၏ဓါပုံများ ကိုလည်း လွှတ်တင်ထားနိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးသာမျိုးစုံကို ရယူနိုင်သည်။Clipart များကို အရေအတွက်များစွာတွေ့နိုင်သည်။
screensaver များအပါအ၀င် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးရနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင် ပန်ချီပြခန်းဖွင့်နိုင်သည်။ ပညာရှင်များ၏လက်ရာပန်းချီများကိုလည်းလေ့လာနိုင်သည်။
ဂျပန်ပန်းချီ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများရယူနိုင်သည်။
ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာ လေ့လာစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။အ၀က်နှင့်အထည်နှင့် အခြားဖက်ရှင်စုံလင်လှသည်။
လှုပ်ရှားမှုဒီဇိုင်းများကို အမျိုးစုံလင်စွာတွေ့မြင်ရသည်။အလွယ်တကူ ရရှိကူယူနိုင်သည်။
Animation ပညာလေ့လာသူများ၊ အသင့်သုံးရန် ရယူလိုသူများအတွက် နာမည်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာလုံးပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစုံ တစ်သောင်းကျော်ပါဝင်သည်။ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်သည်။
ပန်းချီကားကောင်းကောင်းတွေကို လက်ရာ အဆင့်မြင့်မြင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အခြားသော အနုပညာရှင်များ လည်း တွေ့ ရသည်။
အနုပညာဆိုင်ရာ လက်ရာများနှင့် ပန်းချီ၊ ဓာတ်ပုံအဟောင်းများ ရှာဖွေရယူနိုင်သည်။
ပန်းချီပညာကို သင်ကြားပေးနေသော အထင်ကရ လိပ်စာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အနုပညာဆိုင်ရာ သတင်းနှင့် လက်ရာများ တွေ့နိုင်သည်။
အနုပညာဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းများ၊ နာမည်ကျော် ဖန်တီးရှင်များကို ထိုဆိုက်မှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
ဓါတ်ပုံများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ဖန်တီးပြီး ဘလော့ခ်အဖြစ် တင်ထားနိုင်သည်။ Flashplayer version9ကိုတော့
မျက်နှာစာ Screen saver ပြုလုပ်နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲ များစွာကို စုစည်းထားသည်။ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း Slideshow ပြုလုပ်နိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲများကိုလည်း ရယူနိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာ မဂ်ဂဇင်းလိပ်စာဖြစ်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းပညာရပ်များကို လေ့လာ၊ လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာရေးဆွဲနိုင်သည်။ ၀က်ဘ်ဒီဇိုင်းနာများ လေ့လာသင့်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လိုအပ်သောနေရာတိုင်းသုံးနိုင်သော နောက်ခံဒီဇိုင်းပုံများ ရှိရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Burma Related Sites:
ယနေ့ခေတ် IT ကမ္ဘာက လူငယ်များအတွက်ကတော့ Game ဆိုတာဟာ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ အသည်းစွဲပါ။ X Box, Wii Game, Sony, Apple i-pod, Apple i-pad စတဲ့ Digital Device မျိုးစုံနဲ့။ Gamming Adventure တွေကြားမှာ မွေးဖွားလာကြတဲ့ Digital Generation လူငယ်များအတွက် ဒီတစ်လ Inernet Travelling ကဏ္ဍမှာ Internet ပေါ်က ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Free Game Download Website များကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ content မှန်သမျှကို Provide လုပ်ပေးနေ တဲ့ Leading Internet Content Provider ဖြစ်တဲ့ Yahoo! Website ဟာ Free Game Download နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကမ္ဘာ့အကောင်း ဆုံး Website တစ်ခုပါတဲ့။ ဒီဆိုဒ်ပေါ်မှာ Free Game မျိုးစုံသာမက Puzzle Game, Card game စတဲ့ Paper Based Game မျိုးစုံကိုလည်း Download ရယူနိုင်ပါသတဲ့။
ဒီဆိုက်မှာလည်း Game နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Review (သုံးသပ်ချက်) တွေ၊ News Releases တွေ၊ Special Passwords တွေ စတဲ့ Gamming Services တွေအားလုံးကို ရနိုင်တဲ့ အပြင် PC, PS2, PS 3, XBOX, PSP, GBA, DS, Mobile, WII, MMPOG စတဲ့ Devices အစုံအလင်အတွက် Game ပေါင်းစုံကို တစ်နေရာထဲမှာ Download ရနိုင်တဲ့အတွက် PC Gammer တွေ အထူးအကြိုက်တွေ့ မယ့် Website တစ်ခုပါ။
ဒီ Site မှာလည်း gamezone တုန်းကလိုပဲ device အစုံအတွက် Game Download ရယူနိုင်တဲ့ အပြင် ထူးထူးခြားခြား i-phone တွေ i-pad တွေအတွက်လည်း ထိတွေ့ခံစားမှုနဲ့ ဆော့လို့ရတဲ့ Touch Game တွေ Download ရယူလို့ရပါတယ်။ နောက် ဒီ Site ပေါ်မှာ Game နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ Latest Headlines တွေကိုလည်း ဖတ်ရှုလို့ ရပါသေးတယ်။
ဒီ Site ကို ၀င်ဖို့ကတော့ User Name, Password ပါတဲ့ Account တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ ပထမဆုံး လိုပါ တယ်။ ဒီ Site မှာလည်း Game မျိုးစုံ ကို Free Download ရနိုင်တဲ့အပြင် ထူးခြားတာက။ Gamming နဲ့ သက် ဆိုင်တဲ့ Technology Fourm တွေမှာ လည်း ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပြီး အသိပညာ ဖလှယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Online လောကရဲ့ နာမည် ကြီး msn ရဲ့ msn games site မှာ လည်း startegy, Action စတဲ့ High Definition, High Graphic Game မျိုးစုံ ကို Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Site မှာလည်း Game မျိုး စုံ၊ Game နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Review မျိုးစုံ၊ Guide မျိုးစုံကို Download ရယူ နိုင်ပြီး ထူးခြားတာက Religion’s Role in Gamming တို့လိုမျိုး ထူးခြားတဲ့ Topic ကလေးတွေကို ဒီ Site ပေါ် မှာ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီ site ကတော့ Free Game Download နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအကောင်းဆုံး Web-site တစ်ခုပါ။ ဒီဆိုဒ်ရဲ့ Home Page မှာ Selection Popular Games တွေကို Download ဆွဲလို့ ရသလို၊ Website တစ်ခု ဖန်တီးဖို့အတွက် Free Hosting, 300 Free templates, Free Homepage စတာတွေကိုလည်း Download ရယူနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် သူ့ဆီမှာလည်း Arcad Games, Card Games, Puzzles, Sports Games, Word Games အစုံ အလင်ကိုလည်း Free Download ရ ပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ ခုနက ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး Yahoo! Website ရဲ့ Video Games သီးသန့် Free Download Selection Site ပါ။ Video Game မျိုးစုံကို Download ရနိုင်ပါ တယ်။
ဒီ Site မှာတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသေးစား Flash Game ကလေး တွေရယ်၊ ကလေးတွေအကြိုက် Baby Game, Funny Game လေးတွေ မျိုးစုံကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီ Site ကတော့ Game အကြီးစားကြီးတွေကို Download လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပဲ၊ Cell Phone, Pocket PC, Tablet စတဲ့ Small Screen Devices များအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ Game တွေကို Download ရယူနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MP3 – free download sites များ မြန်မာသီချင်းsites
Eng သီချင်း sites
singapore ကျောင်းဝင်ခွင့် guide line
Engineering books တွေ share ပေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးပါ
လိုဂိုလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဆိုက်လေးမှာ လေ့လာနိူင်ပါတယ်..လိုဂိုတွေ ဘယ်လိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာလေးတွေလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်..
ဒီအောက်က ၀က်ဆိုဒ်တွေမှာ ဆောစ့်ဝဲတွေ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆိုင်ရာတွေ တော်တော်များများကို ဒေါင်းလုပ်ချနိူင်ပါတယ်….
word press လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ..
Myanmar Forum များ
English Forum များ
အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်နဲ့ တစ်ခြား စာအုပ်တွေ အမြောက်အများကို အခမဲ့ ရယူနိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပါ။ http://www.4shared.com/
အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာတွေ အမြဲတမ်း အသုံးပြုသင့်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပါ။
ရုပ်ရှင်ဆိုဒ်ပါမြန်မာ ၊ တရုတ် ၊ကိုးရီးယား ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ အမေရိကန် ကားများနဲ့ နိူင်ငံပေါင်းစုံကကားတွေတော်တော
http://www.ultrareach.com/ ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်….
http://www.yousendit.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်…(၁)
http://www.sendthisfile.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်…(၂)
http://www.send6.com ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်…(၃)
http://www.lavalys.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software…(၂)
http://www.spadixbd.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ….(၃)
http://www.memtest86.com/ Memory ကိုစစ်ဖို့ software……
http://www.heidi.ie/ Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software……..
နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software…..
http://www.gadwin.com/printscreen/Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software…
http://www.optimizingpc.com/index.html Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ…
http://www.runtime.org/data-recovery-downloads.htm Hard Disk အတွက်
Recover လုပ်တဲ့ software….
Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software…
http://www.heidi.ie/Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software…
http://www.brothersoft.com/ Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်…
http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-free-edition AVG Antivirus
http://www.insideoe.com/resources/ Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ…
http://www.webroot.com/En_US/index.html Webroot Antivirus & Spyware
Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
http://www.longfocus.com/firefox/ Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ….(၂)
Management လုပ်တဲ့ Software..
http://www.imtoo.com/dvd-ripper-platinum.html DVD ထဲက သီချင်းတွေကို
ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၁)
http://www.objectrescue.com/download/ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော
ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂)
http://www.xilisoft.com/ DVD ဖြတ်တဲ့ Software…
http://www.mp4converter.net/download.html?ID=1 MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ…
http://www.miksoft.net/comments.htm Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software…
(ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software…
http://www.infinadyne.com/flashretriever.html Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ
၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software..
http://www.wnsoft.com/ ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software…
Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software…
ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software…
http://www.pcdocpro.com/ PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software …
http://www.acronis.com.sg/ Partition ချတဲ့ Software…(၁)
http://www.partitionmanager.com/ Partition ချတဲ့ Software….(၂)
http://www.soft32.com/download_151.html Partition ချတဲ့
Software….(၃)…(ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.)
http://www.styopkin.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတဲ့ Software…(၁)
http://www.fastphotorenamer.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့
http://www.infinadyne.com/download.shtml CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software….
ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software…
Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software…
http://www.keronsoft.com/ ပုံတွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software…
http://www.acutesystems.com/ Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတဲ့ Software….
http://www.spadixbd.com/ Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software…
http://www.axialis.com/download/iw.html Icon လုပ်တဲ့ Software…
http://www.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software…..
http://www.lavasoft.de/ Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software…
http://www.irfanview.com/ File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/keytest.htm Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/pt.htm Performance ကိုစစ်တဲ့ Software….
http://www.passmark.com/products/bit.htm PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software…
http://www.testlog.com/ Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ့ Software….
http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm Wireless WiFi
http://www.passmark.com/products/batmon.htm UPS & laptop computer
battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/monitortest.htm Monitor မှ CRT & LCD
မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software..
http://www.passmark.com/products/modemtst.htm Modem ကောင်း ၊
http://www.passmark.com/products/soundcheck.htm Sound Card
http://www.passmark.com/products/oscheck.htm Operation System
Active SMART Software လိုချင်ရင်..
http://www.malwaresweeper.com/ malware တွေကို သတ်တဲ့ Software…
http://www.mediafire.com/download.php?ym02owyxyxb Malware sweeper
http://www.mediafire.com/download.php?mw20ofgdmll Memory Strick
ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်….
http://www.freepdfconvert.com/ pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတဲ့ ဆောဝဲလ်……
httpifile.itdl httpifile.itdl httpifile.itu4kzjd7this_is_a_
Website များစုစည်းရာ (၁) MP3 – free download sites များ မြန်မာသီချင်းsites
ရုပ်ရှင်ဆိုဒ်ပါမြန်မာ ၊ တရုတ် ၊ကိုးရီးယား ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ အမေရိကန် ကားများနဲ့ နိူင်ငံပေါင်းစုံကကားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ Online အမြန်ချောပို့စနစ်ကို
Internet Journal ကို Online ပေါ်မှာဖတ်ချင်ရင်တော့
Online Games တွေကိုကစားကြမလား
အချစ်အကြောင်းဘာတွေသိချင်လဲ အချစ်ကဗျာလေးတွေလား ပုံပြင်လေးတွေလား
အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့် အထိ လေ့လာနိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
medicinenet ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အကြောင်းအရာ များကို လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်မည့် ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
talentsmodels ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မော်ဒယ်အေဂျင်စီ တစ်ခု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်သည်
womenrepublic ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာ အကြံပေးသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။
PC Mesh Anonymous Web Surfing 4.0.0.0
???????????? website ????
http://www.vn247.net/flash/ (flash songs)
http://www.savevid.com video down
macomedia flash player 7
မြန်မာ အွန်လိုင်းဖိုရမ်များ စာရင်း
http://www.people.com.mm (မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်လေးနော်)
http://www.khitluneg.org.mm (ရွှေဈေး၊ဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့ သတင်းစုံတွေ)
http://www.alpha.com.mm (ZawGyi Font လေးတွေယူရအောင်)
http://www.flashband.net (သီချင်းနဲ့ MTV လေးတွေနားထောင်မယ်)
http://www.myanmarmp3.net (သီချင်းတွေ ဒေါင်းမယ်၊နားထောင်မယ်)
http://www.weeklyeleven.com (eleven ဂျာနယ်စုံ)
http://www.studying-singapore.com(ကျောင်းလျှောက်တာ တွေ ကြည့်ချင်ရင်)
http://www.csstb.gov.mm(၀န်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး က ခေါ်တဲ့ အလုပ်တွေနော်)
http://www.unjobs.org(NGO ကခေါ်တဲ့ အလုပ်တွေရှာ မယ်)
http://www.journalopportunity.com ( အလုပ်တွေ ရှာ မယ်နော်)
http://www.jivitahospital.org(ဇီဝိတဒါန ဆေးရုံ အကြောင်း သိချင်ရင်)
http://www.bobo.6te.net (ကလေးများ အတွက် ဘိုဘိုရဲ့ လောကနက်ဂိမ်းနဲ့ ကာတွန်း)
http://www.ucsy.edu.mm (ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အကြောင်း တွေ ဖတ်ချင်ရင်)
http://www.myanmaritpros.com (နည်းပညာအကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရအောင်)
http://www.dhamadarna.net ( ဓမ္မဒါန )
http://www.myanmarengineer.org ( မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများအသင်း )
http://www.phatpa.com (ဖတ်ပါ့ သတင်းဂျာနယ် )
http://www.ourmandalay.net (ကျွန်ုတို့ ရဲ့ မန္တလေး )
http://www.myanmarchatonline.org (online သတင်းလေးတွေ )
http://www.problemclean.ning.com( နည်းပညာလေးတွေဆွေးနွေးရအောင် )
http://www.wikimyanmar.org ( မြန်မာ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း )
http://www.minnkyansis.com ( မင်းကျန်စစ်ရဲ့ ရသကမ္ဘာ )
http://www.nyakabyar.com ဒါလဲသီးချင်းဆိုက်ပါပဲ။ ကျနော်သူငယ်ချင်းအတွက်နော်။
http://www.myanmarmp3.net ဒါလေးကလည်းအတူတူပါပဲနော်။ သီးချင်းပါပဲ။
http://www.searchmyanmar.com ဒီဆိုက်ကလဲကောင်းတယ်နော်။ အသုံးများကတော့ link
http://www.hancinema.com (or) net
ဒါကတော့ http://www.thefreesite.com ဆိုက်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံး free
http://www.ornagai.com ဒါကတော့အဘိဓာန်တွေဝေငှပေးတယ်နော်။ အကုန်လုံးပေါ့။
http://: http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်….
http://www.thelist.com/countrycode.html#top နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်….
http:// http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား….
http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a…&#8230; ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း…
http:// http://sharingtofrds.blogspot.com/ နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်…
http://photofunia.com/ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မြင်ဖို့…..
http://www.passwordmeter.com/ သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်ရင်…
http://burglish.googlepages.com/fontconv.htm မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်…
http://burglish.googlepages.com/testarea.htm မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ…
http://www.mmphotoshop.net Photoshop ကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖို့…
http://www.whatismyipaddress.com Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကို ဖမ်းဖို့…
http://www.4shared.com/file/80626166/b5161ee5/GTunnel.html?cau2=403tNu&#8230; GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်….
http://technorati.com/ Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်….
http://www.alpha.com.mm/alphaprice/alphaprice.php ကွန်ပျူတာ ဈေးနှုန်းတွက်ချင်ရင်…
http://www.download.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239&#8230; နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software…..
http://www.runtime.org/data-recovery-downloads.htm Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software….
http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Partition-Magic.sh&#8230; Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software…
http://www.customizetalk.com/ Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်…
http:// http:// http://www.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့…
http:// http://www.mediaringtalk.com ဖုန်းအလကားပြောရဖို့နေရာ……
http:// http://www.w3schools.com/ ပရိုဂမ်သမားတွေအတွက်….
http://www.flashvortex.com/index.php စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးလေးတွေ…
http:// http://www.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ….
http:// http:// http://www.myanmarengineer.org အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ..
http:// http:// http://www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်…
http:// http://www.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့… အသုံးပြုနည်းကိုတော့ Blog နံပါတ် 46 မှာရေးထားပါတယ်..
http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-free-edition AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ….
http://isoft.ygn.cc/ မြန်မာ့ ပညာရှင်များကို လေ့လာဖို့…
http://www.softpedia.com/get/internet/E-mail/Mail/Utilities/Gmail-Mana&#8230; Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
http://www.softpedia.com/get/Antivirus/Trojan-Remover.shtml Trojan (ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software…
http://www.freedownloadscenter.com/Search/internet_cleaner.html Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software…
http://www.powerkaraoke.com/src/prod_karaokecdgcreatorpro.php ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software…
http://www.soft32.com/download_151.html Partition ချတဲ့ Software….(၃)…(ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.)
http://www.fastphotorenamer.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့ Software…(၂)
http://www.download3000.com/download_27264.html ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software…
http://www.manageengine.com/products/desktop-central/software-hardware&#8230; Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software…
http://www.messx.net/download.php English – Myanmar အဘိဓာန် Software…(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
http://dictionary.all-channel.com/ English – Myanmar – English Online အဘိဓာန်…(၁)
http://www.burmese-dictionary.org/ Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်…(၂)
http://www.ayinepan.com/literature/dictionary/ English – Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်….
http://www.monywa.org/fonts/index.htm English – Myanmar ဖောင့်များ…..
http://www.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်…
http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/batmon.htm UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/modemtst.htm Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/soundcheck.htm Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software…
http://www.passmark.com/products/oscheck.htm Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software…
http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id=1445004%3ABlogPost%3A67&#8230; ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့…..(၁)
http://myanmaritpros.com/group/smenetworking ISA server ကို မြန်မာလို လေ့လာဖို့…(၂)
http://download.cnet.com/Active-SMART/3000-2086_4-10055071.html?part=d&#8230; Active SMART Software လိုချင်ရင်..
http://www.brothersoft.com/google-talk-shell-70998.html Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software….(၁)
http://www.softpedia.com/progDownload/google-talk-shell-Download-71248&#8230; Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software….(၂)
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လာကြည့်ပါ…။လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။
http://www.mediafire.com/download.php?ym02owyxyxb Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့…
http://www.mediafire.com/download.php?mw20ofgdmll Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်….
http:// http://vn247.net/flash/Relax/drink-cafe.swf ကော်ဖီချင်ရင်သောက်ဖို့ပါ…
http://www.ehow.com/how_2124668_remove-trojan-virus.htm ဗိုက်ရဒ် စကင်းများ free ဒေါင်းနိုင်သည်
http://www.worldenglishinstitute.org (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် TOEFL အထောက်အကူပြုစာစဉ်ရရှိနိုင်သည်)
2. http://www.shareme.com (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအကြောင်းစုံလင်စွာရရှိနိုင်သည်)
3. http://www.learningpage.com (ဘာသာရပ်အတော်စုံပါသည်။ လူလတ်ပိုင်းများလေ့လာသင့်သည်)
4. http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php ( အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စမ်းသပ်ရန်အတွက် အခမဲ့ ရယူနိုင်သည်) http://www.myanmarnlp.org.mm/index.php?option=com_content&view=&#8230;
5. http://www.merriam-webster.com (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်)
6. http://www.commerce-database.com (စီးပွားရေးစကားအသုံးများကို လေ့လာနိုင်သော အဘိဓါန်ဖြစ်သည်)
7. http://www.computerweekly.com (နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းစုံဖော်ပြထားသည်)
9. http://www.fixya.com ( အလွန်ကောင်းပါသည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများအတွက်ပြင်ဆင်နည်း၊ အသုံးပြုနည်းများ အတော်စုံလင်ပါသည်)
10. http://www.universalclass.com (အွန်လိုင်းပေါ်မှ အဝေးရောက်သင်ယူနိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်စနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်သင်ယူနိုင်သည်)
11. http://www.houseofplant.co.uk (အိမ်တွင်းပန်းအလှဆင်နည်းပညာများအကြောင်းလေ့လာနိုင်သည်)
http://www.lpi.org (Linux စနစ်ကိုလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများ အကြောင်းလည်ပါရှိသည်)
2. http://www.helpwithpcs.com (ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာတွေ့ရသည်)
3. http://www.simplehelp.net (မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းနိုင်သည်)
4. http://www.asia-oss.net (Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင်သည်)
5. http://www.databasejournal.com (Database သီးသန့်စုစည်းထားသည်။ အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်သည်)
6. http://www.wwpi.com (ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်)
http://www.psdfreebee.com (Photoshop နည်းပညာကို စလယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်)
8. http://www.educational-software.com (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်)
9. http://www.educationalsoftware.co.uk (ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်သည်)
10. http://www.okino.com (ဂရပ်ဖစ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များစွာကို လေ့လာနိုင်သည်)
http://www.emailaccount.com (Domain များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်)
2. http://www.gawab.com (Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail ဖြစ်သည်)
3. http://www.inbox.com (သုံးအားကောင်းပြီး လိုင်းဝင်ထွက်လွယ်ကူမြန်ဆန်ကာ 5GB ပေးထားသော free mail ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
4. http://www.hotmail.com (Microsoft မှ လွှင့်တင်ထားသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
5. http://www.mail.com (အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများစွာကိုရရှိသုံးစွဲနိုင်သည်)
6. http://www.myway.com (အလှဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများဖြင့် ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်)
7. http://www.dora.com (၎င်းတွင်လည်း ပြင်ဆင်ပုံအလှတစ်မျိုးနှင့် မြင်တွေ့ရရှိနိုင်သည်)
9. http://www.eudora.com (နာမည်တော့ရှိပါတယ် မြန်မာပရိသတ်နည်းပါတယ်)
10. http://www.30gigs.net (အခမဲ့ 30GB ရရှိနိုင်သော မေးလ် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်)
http://www.thefreesite.com ဆိုက်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံး free ရတယ်ပြောတာပဲနော်။
http://www.photoro.com ဆိုက်လည်းဓာတ်ပုံကောင်းတယ်ပြောတယ်နော်။ဟိုကိုရီးယားကား ဒိုးဒိုးဒေါက်2ဘုနှင့်ဘောက်
http://api.ning.com/files/iwBtgDi6JL514kqx63rc61HQ6drUjzuF7v38fGN9S…*BCmO6AlghoDD0O4*xAroSG19/Mailhack.html သူများ Gmail ကို Hack ကြရအောင်ဗျာ…သိအောင်ပဲ ပြောပြတာပါ၊ လုပ်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ဖော်ပြပါ လိပ်စာကို အားလုံး Copy ကူးယူပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ၊
မိမိ Hack လိုသော Gmail account ကို ရိုက်ပြီး ခဏစောင့်ပါ…
http://translate.google.com ဒီလင့်မှာ ရီဂျစ်စတာ သွားလုပ်ရင် BitDefender AntiVirus 2009 တစ်နှစ်လိုင်စင် ရပါတယ်။ Create user နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အီးမေးလ် စစ်စရာ မလို ချက်ချင်းကို ပေးတာ။ ဒီလောက်ပေါတာ ဟိုမှာ သွားဝယ်ဖို့ လိုသေးလို့လား 😛
http://www.nyinaymin.com ညီနေမင်း ဆော့ ဖ် ၀ဲတွေ ….ဘာတွေ အစုံ ပါတယ်မြန်မာလိုတော်တော်များများရေးထားတယ်
http://nattabin.ning.com/profiles/profile/emailSettings?xg_source=m…>သရဲ တစ္ဆေ ဘုံ ဖိုရမ်
http://future-wave.blogspot.com/ Future Wave Blog – အနာဂတ်လှိုင်း-ရခိုင့်စာပီရပ်ဝန်း
http://www.undergroundsystems.org http://www.blackhat-forums.com http://www.phpbbhacks.com ဟက်တဲ့ဆိုက်ပါတဲ့ဝါသနာ ပါရင်ကြည့်ကြပေါ့
http://www.multimediapalace.com လှုပ်ရှားနေတဲ့အလံလေးတွေက ဒီမာဗျ…
2. http://www.bamarlay.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
3. http://www.irazoo.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
4. http://www.myanmarmp3.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
5. http://www.ayinepan.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
7. http://www.alinyaung.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
8. http://www.flashband.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
9. http://www.myanmar-music.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
11. http://www.emusic.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
12. http://www.thewiplist.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
13. http://www.mp3raid.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
14. http://www.pansagar.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
15. http://www.airmp3.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
17. http://www.innwa.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
18. http://www.nyakabyar.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
19. http://www.ayinepan.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
20. http://www.ainmat.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
21. http://www.lotaya.com (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
22. http://www.myanmarmusiconline.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
24. http://www.myanmarmp3.net (မြန်မာ mp3 များကို အလွယ်တကူရယူနားဆင်နိုင်သည်)
http://www.myanmarsoungs.net ဒီဆိုက်ကတော့ dowmload ဆွဲလို့လွယ်တယ်
http://www.myanmar.mmtimes.com (မြန်မာတိုင်းစ် ဂျာနယ်ကိုမြန်မာလိုဖတ်မယ်နော်)
http://www.studying-singapore.com (ကျောင်းလျှောက်တာတွေ ကြည့်ချင်ရင်)
http://www.jivitahospital.org (ဇီဝိတဒါနဆေးရုံ အကြောင်း သိချင်ရင်)
http://www.bobo.6te.net (ကလေးများ အတွက် ဘိုဘိုရဲ့လောကနက်ဂိမ်းနဲ့ ကာတွန်း)
http://www.ucsy.edu.mm (ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အကြောင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင်)
http://www.mysuboo.com (ဒါကတော့ စုဗူးလေးနော်)
http://www.myanmarengineer.org ( မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများအသင်း )
http://www.myanmarchatonline.org (onlineသတင်းလေးတွေ )
• http://www.torncity.com ဆော့လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ သူဂိမ်းက Life style အတိုင်းပဲ
• http://www.y8.com ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်းလေးတွေပါ free download ရတဲ့ဟာတော့ရတယ်ဗျ။
34 comments on “ဆိုက်လမ်းညွန်”
ဘယ်သူမှမကြုံဖူးတာတွေ ငါ့မှာ လာ⁠လာကြုံနေရတာ
ဘာကြောင့်လဲဟ …ကောင်မလေးရေ ..
စိတ်ထဲက ဖြစ်ဖြစ် ခဏလောက် အားပေးပါ
တစိမ့်စိမ့်ကြည့်စရာဆိုလို့ Monitor ရယ် တယုတယကိုင်စရာဆိုလို့ Keyboard ရယ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာဆိုလို့ Razer mouse ရယ် တီတီတာတာလေးရယ်ဆိုလို့ မီးပျက်ရင်အော်တဲ့ UPS ပဲရှိတယ် အော် ဆိုးလိုက်တဲ့ဘ၀
ချစ်သူ နောက်ဆိုရင်လေ …ငါ့ကိုမတွေ့ရင် FACEBOOK ထဲမှာလဲမရှာနဲ့ GTALK ထဲလဲမရှာနဲ့နော် သူများတကာတွေလို မင်းရင်ခွင်ထဲမှာလည်းမရှာနဲ့ စစ်တပ်ထဲကိုသာလာခဲ့ သေချာပေါက်ငါစစ်မှုထမ်းနေတယ်……
အဆင်းရဲဆုံးက စိတ် —
အရှားပါးဆုံးက အမုန်း —
အဝေးဆုံးက ချစ်သူ —
အစောဆုံးက နေ၀င်ချိန် —
ကိုယ်ကယူတာ…မေတ္တာ ဆိုတာ ကိုယ်ကပေးချင်တာလေ။
ငါ့အတွက်တော့ ဘာကိုမှ မလိုအပ်တော့တာပါ။
ငါ ကိုယ်တိုင် ရိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ် . . . .
အိပ်မက်တွေ ကို ရိုက်ချိုးခဲ့တယ် . . . .
ငါ ကိုယ်တိုင် ကျိုးနွံခဲ့တယ် . . . .
နှလုံးသားကို မြေမြှုပ်ထားတယ် . . . .
လိုချင်ခဲ့တဲ့ မေတ္တာတရားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအတွက်
ကြင်နာတာ ဟာ ဟန်ဆောင်တာ
ဟန်ဆောင်တာ ဟာ နာကျင်စေတယ် . . . .
ဒဏ်ရာတွေ ဟာ အမာရွတ်လေး အဖြစ်ကျန်ခဲ့မယ် . . . .
သေဆုံးသွားသည့်တိုင် ရှိနေမယ့် အမာရွတ်လေးက နင် . . . .
ငါ ထာဝရ တိုင် မြတ်နိုးသွားမယ် . . . . ။
အချို့က ချစ်လျက်နဲ့ကွဲကြတယ်… ဒါပေမယ့်…. မုသားတွေပါတယ် …။အချို့က ကွဲရက်နဲ့ ချစ်ကြတယ်… ဒါပေမယ့် …..မာနတွေပါတယ် ….။အချို့က ဝေးလျက်နဲ့ နားလည်ကြတယ်..ဒါပေမယ့်…. အချစ်ဆိုတာပါတယ် …
♥♥♥________♥♥♥__ _♥_____♥____♥____♥ ___♥_______♥_______♥ ___♥____ချစ်တယ်___♥__ ____♥_________♥__ ______♥_____♥____ _________♥__________ __♥♥♥________♥♥♥__ _♥_____♥____♥____♥ ___♥_______♥_______♥ ___♥____ချစ်တယ်___♥__ ____♥_________♥__ ______♥_____♥____ _________♥______
သတိရတိုင်း…ပြန်ဆုံဘို့ ပဲ.. အတွေးရှိနေတဲ့..စက္ကန့်တိုင်း…လေ ခုလိုအပျော်တွေများနေတဲ့….နှစ်တနှစ်တွက်.. ချစ်သူရယ်..သတိတရ..လွမ်းရတိုင်း… ငါတယောက်တည်း…ထီးကျန်လွန်းတယ်…
ကြွေသူ့ရင်မှာ ဘယ်လောက် နာကျင်ရတယ်ဆိုတာ
အစကတည်းက မိုးပေါ်မှာ မွှေးပျံ့နေလို့
ချစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲ မြေပြင်မှာ နွမ်းခြောက်နေလဲ
အမြဲထာဝရ မပြောင်းလဲပဲ ရှိနေမှာပါ
မေ့ဖို့ဆို ပိုဝေးတယ် ……
လမင်းမှာတော့ နေမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်မပေးတဲ့ရက်မှာတော့ လမိုက်ညဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ…
စာအုပ်အဖြစ် ပြန်လည် မှတ်စုတင်ထားလိုက်ပါတယ်
လက်တွဲဖော်ချစ်သူ ဆိုတဲ့ စာအုပ်အမည်လေးနဲ့ 
Facebook Background ပြောင်းနည်း
အဲ့ဒါကတော့ အခုပေးတဲ့လင့်ခ်လေးပါ ဆော့ဝဲလ်လေးဒေါင်းလိုက်ပါ..
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကို ကိုယ့်စက်မှာ ( ဆိုင်မှာသုံးနေတဲ့လူတွေ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် စတစ်နဲ့ သိမ်းထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတရ် ) အင်စတောလုပ်ပါ ………..
အင်စတောလုပ်ပြီးရင် သူက မော်ဇီလာကို ရီစတက်ချပါလိမ့်မရ် …….
အဲ့ဒါပြီးရင် မော်ဇီလာပြန်ဖွင့်ပါ ……..
မော်ဇီလာ ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် မော်ဇီလာရဲ့ ညာဘက်ထောင့်နား ( Google Serch ) ဘေးမှာ ပုံလေးတစ်ခု တက်နေပါလိမ့်မရ် ( ပုံကတော့ အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ မိကျောင်းလိုပုံစံ…… အလွယ်ပြောရရင် သူငယ်ချင်းတို့ ဒေါင်းတဲ့ဆော့ဝဲလ်ပုံလေးပါပဲ )
အဲ့ဒါပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ……….
ပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် သူ့ဆိုက်ပြန်ကျလာပါလိမ့်မရ် …….. အဲ့ဒီ့ထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘက်ဂရောင်းကို Selet ပေးလိုက်ပါ ……… အဲ့ဒါပြီးရင် သူက ဖေ့ဘွတ်ကိုသွားဖို့အတွက် ပုံနေရာမှာပြောပါလိမ့်မရ် ….. အဲ့ဒီ့နေရာကို နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ ………….
( ၀င်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ တန်းရောက်ပါလိမ့်မရ် …….. မ၀င်ရသေးရင် ပြန်ဝင်လိုက်ပါ ……. ပုံလှလှလေးနဲ့ ကိုယ့် Face Book Profile ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မရ်)
နည်းပညာလေ့လာ ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် မြန်မာအိုင်တီပညာရှင်များ၏ ဆိုက်များဖြစ်ပါသည်.. :121: :113:
1. http://www.myanmarengineer.org 2. http://www.mysteryzillion.org
3. http://www.myanmaritpros.com 4. http://www.mmitdevelopment.co.cc
5. http://forums.nativemyanmar.net 6. http://www.mmopenxteam.com
7. http://www.myanmarfamily.org 8. http://www.myanmarnetworknews.com
9. http://www.kopyaesone.co.cc 10. http://myanmarbloggersociety.ning.com
11. http://www.myanmaronlinezone.net 12. http://www.eyesforlife.ning.com
13. http://www.itmgmg.com 14. http://www.myanmarchatonline.com
15. http://myantel.co.cc 16. https://shweone.wordpress.com
17. http://www.saturngod.net 18. http://aungthulinn.ning.com
19. http://www.htootayzar.com 20. http://blog.atomicdevelopment.net
21. http://www.manawthar.com 22. http://www.mydigitallife.info
23. http://myatlone.blogspot.com 24. http://www.mmso.org
25. http://www.myanmaritresource.info 26. http://www.myanmardaily.net
27. http://www.myanmarglaxy.com 28. http://www.nyilynnseck.com
29. http://itmen.myanmarbloggers.org 30. http://www.nyinaymin.com
31. http://www.myanmarnlp.org.mm 32. http://alinyaung.org
34. http://foolit.forumotion.com 35. http://easywhois.com
37. https://daweithar.ning.com 38. http://www.itmyanmar.co.cc
39. http://www.magwaythar.co.cc 40. http://kotzp.co.cc
41. http://blackeagles.22web.net 42. http://linhtet.com 43. http://www.myanmarcupid.net 44. http://www.crystalrays.org
45. http://www.effectgenerator.com 46. http://www.soemin.net
47. http://lupyogyi.info 48. http://www.all-channel.com 49. http://www.mysuboo.com 50. http://mmblogpress.com 51. http://www.itworks.co.cc
52. http://www.engineer4myanmar.com 53. http://www.english4myanmar.com
54. http://www.royal-myanmar.com 55. http://www.autocad4myanmar.com
56. http://www.it4mm.net 57. http://www.myanmartraining.com
58. http://itexamcollection.com 59. http://www.certfiles.com
60. http://www.mmcybermedia.com 61. http://edumysteryzillion.org
62. http://www.mmgeeks.org 63. http://www.myanmarinternetjournal.com
64. http://www.creatingonline.com 65. http://www.mcpamyanmar.org
66. http://technical-seven.com 67. http://www.visualcertexam.com
68. http://mrdba.info 69. http://www.myanmarprogrammers.com
70. http://kozaw357.multiply.com 71. http://beta.eyeos.info
72. http://www.yatanarpon.com.mm 73. http://www.favoritus.com
74. http://www.myanmar-friend.ning.com 75. http://www.notebookofstarryprince.co.cc 76. http://www.thanzinhlaing.com 77. http://www.htm2pdf.co.uk
78. http://taryarpwagye.ning.com 79. http://www.myanmarlensman.com
81. https://www.pdf-tools.com/osa/repair.aspx (Repair pdf)
83. http://student.mmblogs.net 84. http://www.dhammadownload.com
85. http://www.softlistnet 86. http://myanmaritzone.ning.com
87. http://mmopenlibrary.com 88. http://kopyai.ning.com
89. http://mistake51area.ning.com (https://www.m51a.com)
90. http://zawtk.mylovecafe.net 91. http://www.myanmarlensman.com
92. http://www.captainzero.webs.com 93. http://aungmyo21.multiply.com
94. http://tsmunpi.multiply.com 95. http://tgderic.multiply.com
96. http://thetnaing.myanmarbloggers.org 97. http://www.phyowaizaww.co.cc
98. http://www.fspro.net 99. http://www.targyi.co.cc 100. https://pyaephyonaing.wordpress.com 101. http://www.komyatmm7.co.cc
103. http://moetain1989.blog.friendster.com 104. http://www.naisithu.co.cc
105. http://www.konaymyo.com 106. http://www.ogresite.com
108. http://pintkueeain.pookeo.net 109. http://www.myanmar-zawko.co.cc
110. http://www.apytz.net 111. https://ktlinn2008.wordpress.com
112. http://www.zaylayworld.co.cc 113. http://www.zawlynnhtun.page.tl
114. http://www.mandalaygazette.com 115. http://www.tyalife.com
116. https://mmwordpress.com 117. http://www.worldwidemyanmar.com
118. http://www.planetcreater.net ( Eng Ver) 119. http://serversniff.net
120. http://www.windowsnetworking.com 121. http://mm3xpl0it.co.cc (zero)
122. http://www.zaung.net 123. http://www.zaw357.net
124. http://kozaw357.multiply.com 125. http://www.myidgroup.org
126. http://www.myanmaritmen.com 127. http://pikay.myanmarbloggers.org
128. http://nyinyi.myanmarbloggers.org 129. http://www.waidar.co.cc
130. http://www.gipsy3.co.cc 131. http://www.zarnimaung.co.cc
132. http://kozin.yolasite.com 133. http://itmen.myanmarbloggers.org
134. http://www.photartay.com 135. http://yethusoe.mylovecafe.com
136. http://kanaung.com 137. http://www.mghla.net
138. http://ypp51area.yolasite.com 139. http://lettwebaw.mylovecafe.net 140. http://laytakhon.mylovecafe.net 141. http://www.z-thegardener.com
142. http://www.thuriya.org 143. http://www.sitandread.com 144. http://www.myanmars.net 145. http://www.w3schools.com 146. http://www.tu-lay.net 147. https://mmitdev.com 148. http://knowfree.net 149. http://www.shwekyunthar.com
150. http://www.chapterface.webs.com 151. http://www.englishforum.com
152. http://www.hinnlin.co.cc 153. http://www.software.moeeaintphyu.net
154. http://www.kothurein.co.cc 155. http://www.mmphotoshop.net
156. http://www.myanmargenius.com 157. http://koprince.isgreat.org
158. http://myanmarspace.com 159. http://www.padonma.com
160. http://www.myanmar-channel.com 161. http://mybookface.net
162. http://www.kkz-ratha.co.cc 163. https://ktlinn2008.wordpress.com
164. http://www.phoelapyae.com 165. http://www.loopavoidance.com
168. http://www.pendriveapps.com ( Portable Software) အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ.
တစ်ခါတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ ရွာတစ်ရွာကို
ရွာတစ်ရွာမှာတော့ သူကြီးက တုံးခေါက်ပြီး.. ရွာသားတွေကို စုဝေးစေသတဲ့..။
ပြီးတော့ သူကြီးက ဘရင်ကြီးပို့လိုက်တဲ့ သစ်တုံးပေါ်မှာ ခန့်ခန့်ညားညားကြီးရပ်ပြီး..
ဘုရင်မင်းမြတ်က.. ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ ရွာတစ်ရွာကို သစ်တုံးကြီးတစ်တုံးစီ..
သစ်တုံးကြီးကို ဒို့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ.. လို့ ရွာသားတွေကို မေးတယ်တဲ့..။
ရွာသားတွေလည်း သစ်တုံးကြီးကို ဟိုပတ်လိုက် ဒီပတ်လိုက်ကြည့်ပြီး..
သူကြီးကို ဒီလောက်ကြီးတဲ့ သစ်တုံးကြီးကို လှေထွင်းရင်ရလောက်တယ်…လို့ပြောတော့
အားလုံးသဘောတူပြီး… လှေထွင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်..။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ ရွာသားတွေအားလုံး ဓား၊ ပုဆိန်တွေနဲ့ အားတတ်သရော..
သစ်တုံးကြီးကို လှေဖြစ်အောင်ထွင်းကြတယ်တဲ့.. ပြီးလဲပြီးရော သူကြီးက တတ်ကြည့်လိုက်တော့..
လှေဝမ်းက .. အပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့..၊။
သူကြီးက ဒုက္ခပါဘဲ လို့ လှေကြီးက အပေါက်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ .. ဘယ်မှာသွားသုံးမလဲ လို့ ပြောရှာတယ်
ကဲ နောက်ထပ် ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြဦး.. ဒီလှေကို ဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ လို့မေးတယ်တဲ့။
ဒီတော့ ရွာသားတွေက တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အကြံမျိုးမျိုးပေးကြရင်း..
တစ်ယောက်က စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်တစ်စုံ.. စာလုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ အကြံပေးရင်း..
အားလုံးသဘောတူကြပြီး စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်တစ်စုံ အားကျိုးမာန်တတ် ကြိုးစားဝိုင်းလုပ်ကြပြန်တယ်.။
အားလုံး ပြီးသွားရော သူကြီးက မောမောနဲ့ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ နားမယ်ဆိုပြီး တက်ထိုင်လိုက်တာနဲ့
သူကြီးက ဒုက္ခပါဘဲ ဖြစ်ပြန်ပါပြီး ကဲ… ဘာဆက်လုပ်လို့ ရမလဲ.. ၀ိုင်းစဉ်းစားကြပါဦး. ဆိုပြီး
ပြောတော့.. စဉ်းတီးတုံးတော့ ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုပြီး စဉ်းတီးတုံး -၀ိုင်းလုပ်ကြပြန်ရောတဲ့…
စဉ်းတီတုံးလည်း ပြီးသွားရော၊ ကြည့်လိုက်တော့ အပဲ့ ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့. ၊ သူကြီးက ပြောရင်း..
ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတုန်း (သွားကြားထိုးတံ) ကိုက်ထားတဲ့ ရွာထဲက လူငယ်တစ်ယောက်
က သူကြီး ဘာဆက်လုပ်မလဲ လို့ မေးတယ်တဲ့..
အဲ့ဒီတော့မှ သူကြီးက မျက်နှာဝင်းခနဲ ဖြစ်သွားပြီး ဟာ.. ခုမှ ငါအကြံရတယ်။
သွားကြားထိုးတံ လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုပြီး သွားကြားထိုးတံ လုပ်နေကြပြန်တယ်တဲ့…။
နည်းပညာမရှိရင် .. ကြီးမားတဲ့
သစ်တုံးကြီးတောင် … သွားကြားထိုးတံ ဖြစ်တတ်တယ်…။
Free Domain Names Site
http://www.s5network.info – free .com .net .org .info .biz
http://www.registerfly.com, http://www.nucleus.be – free .be
http://www.goodluckdomain.in/dotorg.html – free .org
http://www.domainsite.com – free .info
http://forums.inuration.net – free .com .net .org .info .biz
yoursite.net.tc, yoursite.net.ms, etc. http://www.smartdots.com, http://www.unonic.com, and http://www.cydots.com
yoursite.us.tt, yoursite.uk.tt, etc. http://www.joynic.com
yoursite.i.am, yoursite.on.to, etc http://www.v3.com
yoursite.q.la, yoursite.1.vg, etc. http://www.afraid.org
yoursite.4t.com, yoursite.8k.com, etc. http://www.freeservers.com
yoursite.b3.nu, etc. http://www.smartredirect.com
yoursite.com.ru, yoursite.net.ru, etc. http://www.lifelesspeople.com
yoursite.eu.org http://www.eu.org –
yoursite.za.net http://www.za.net –
အွန်လိုင်းမှာ Photos တွေကို Funny အနေနဲ့ ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် လင့်ခ်လေးများကို သိသလောက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။ လုပ်နည်းတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ..။ တော်တော်များများ အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေပါတယ်..။
က မ္ဘာ့ အကော င်းဆုံး Fashion Website ၁၀ ခု
ယနေ့ ၂၁ ရာစုမှာတော့ ဖက်ရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူတိုင်းနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးနေတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ `တောင်းမှာအကွပ် လူမှာအ၀တ်´ လို့ဆိုတဲ့ ရှေးမြန်မာဆိုရိုးစကား တစ်ခုအတိုင်း လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဖက်ရှင်ဟာ အရေးပါလှပါတယ်။ တစ်ခါ တလေမှာ ဖက်ရှင်ရဲ့ သက်ရောက်မှုဟာ လူသားတွေရဲ့ လူမှုဘ၀တစ်ခုလုံးကိုပါ ပြောင်းလဲသွား တတ်စေတာမို့ ၂၁ ရာစုရဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဖက်ရှင်ရေစီးတွေမှာ စီးမျောနေကြတဲ့ ပျိုပျိုအိုအို ကြီးငယ်မရွေးအတွက် ယခုလအတွက် Internet Travelling ကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဖက်ရှင် Website ၁၀ ခုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Website ၁၀ ခုလုံးရဲ့ Rank ကိုတော့ ကမ္ဘာကျော် ဖက်ရှင်အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Love To Know အဖွဲ့ကြီးက သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Website မှာတော့ ၅၈၀၀၀ ကျော်သော designer တွေ Brand တွေရဲ့ ရာသီအလိုက်ဖက်ရှင် (Seasonal Fashion) တွေ၊ Trend တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Latest News တွေ၊ Fashion Forum, Chatting တွေ၊ နောက်ဆုံးပေါ် Skin Protection Technique (အရေပြား ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်း) တွေကိုပါ အခမဲ့ download လုပ် နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အကောင်းဆုံးဖက်ရှင် Website တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ web site မှာတော့ Fashion နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့သတင်းလွှာ (News letter) တွေကို register လုပ်ပြီး အခမဲ့ရယူနိုင်ကြ သလို Fashion Trend မျိုးစုံရဲ့ မတူညီတဲ့ Photo မျိုးစုံကိုလည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင် ကြပါတယ်။
www. women. com
ဒီ Website ကတော့ ဖက်ရှင်မှဖက်ရှင် အရူး အမူးဖြစ်တဲ့ မမတို့အတွက်ပါ။ ဒီဆိုက်မှာလည်း အမျိုး သမီးဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Style advice အကြံ ပေးချက်တွေ၊ Trend တွေကို ကြည့်ရှုလို့ရသလို၊ Fashion နဲ့ပါတ် သက်တဲ့ သိလိုသမျှ မေးခွန်းတွေကိုလည်း မေးမြန်းလို့ရ ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Sesonal Tips တွေ၊ ကျော်ကြားသူတို့ရဲ့ celebrity Fashion news တွေ သာမက အပတ်စဉ် Weekly Top 10 focus အဖြစ် Fashion နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Hot Topics တွေကိုပါ download ရယူနိုင်ကြပါတယ်။
www. lovetoknow. com
ဒီ site မှာတော့ အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီး တွေရောနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Fashion Tips အစုံအလင်ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြသလို၊ ထူးခြားချက်အဖြစ် ဆယ် ကျော်သက်တွေအတွက် Fashion for teens ကဏ္ဍကို လည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
ဒီဆိုဒ်မှာလည်း ထုံးစံအတိုင်း Fashion နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ Topic အစုံအလင်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ထူးထူးခြားခြားအဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဖက်ရှင် (Daily Fashion)နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် (Do’s and Don’ts) အချက်အလက်တွေကို လေ့လာ နိုင်ကြပါသတဲ့။
ဒီ site ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ခေတ် အလိုက် ဖက်ရှင်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို အချိန်ဇယား (Time line)အလိုက် စုစည်းဖော်ပြ ထားတဲ့ Website တစ်ခုပါ။ သူရဲ့ Fashion Tour စတဲ့ ကာလ အပိုင်းအခြားကတော့ era between 1900-1910 ကပါ။ ဖက်ရှင်သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စား ကြတဲ့သူတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Website တစ်ခုပါ။
ဒီ site မှာတော့ ကမ္ဘာကျော် Designer တွေရဲ့ design မျိုးစုံနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊
design နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Industry works တွေကို လေ့လာ သင်ယူနိုင်ရုံမက sample designs တွေကိုပါ ပြသထား တာမို့ ဒီဇိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ Designer တွေအတွက် မကြည့်မဖြစ် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကြရမယ့် site တစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာကျော် Fashion Cities ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Paris နဲ့ Milan တို့က နောက်ဆုံးပေါ် latest Collections တွေကိုပါ လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီ site ကတော့ ထင်ရှားတဲ့ Major online Fahsion Magazine တစ်စောင်ပါ။ runway news, daily headlines, new collections, fashion jewerly စတဲ့ Topic တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ကြသလို trendletter ကိုလည်း Regist-eration လုပ်ပြီး email က တဆင့် အခမဲ့ရယူနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီ site ကတော့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆယ် ကျော်သက်နဲ့ ကလေးတွေအတွက် အ၀တ်အထည်မျိုးစုံ ရောင်းချတဲ့ on-line shopping mall တစ်ခုပါ။ Categories မျိုးစုံ၊ Design မျိုးစုံ၊ Brand မျိုးစုံကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင် ကြတဲ့အတွက် Design Crazy တွေအကြိုက်တွေ့ကြမယ့် website တစ်ခုပါပဲ။
Internet Travelling ကဏ္ဍ နောက်လတွေမှာတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အခမဲ့ဗေဒင်မေးနိုင်တဲ့ Website တွေ၊ ဟာသအကြောင်း Website တွေ၊ စိတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘ၀အောင်မြင်မှုတွေအတွက် လေ့လာစရာ Website အဖြာဖြာတို့ကို တင်ပြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ကိုရီးယားစာကို အခမဲ့ သင်ပေးကြားမဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Sogang တက္ကသိုလ် ကနေ ကိုရီးယားစာကို အခမဲ့ သင်ပေးကြားမဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် လေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားစာကို အခြေခံကနေ အဆင့်မြင့်မြင့် တတ်ကျွမ်းသည်အထိ အွန်လိုင်းကနေ လေ့လာနိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အက္ခရာတွေ၊ အသံထွက်တွေ လည်း မိမိကွန်ပျူတာထဲ ဒေါင်းလော့ယူပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားဘာသာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြောနဲ့ နားဆင်မှု စွမ်းရည် တွေကို ရရှိစေမယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားစာသင်ရင်းနဲ့ပဲ နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုပါ သင်ကြားပေးတဲ့ အတွက် စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Click လုပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။
http://loweimages.com ဆိုက်ဟာဆိုရင် တစ်ကယ့်ကို တမင်တကာ အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ထားတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တယ် . မြင်သမျှ program တွေကလဲ latest version ချည်းပဲ . မသိတဲ့သူအဖို့တော့ သွားရည်ယိုစရာချည်းပါပဲ .
ဟိုမွှေဒီမွှေ လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ် တွေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Websites ကလေးတွေ တွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ မျှလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာ ဆိုဒ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် တချို့ ဆိုဒ်တွေ ထဲမှာ မြန်မာလိုစာအုပ်တွေ Upload တင်ထားတာတွေ ရှိတော့ မြန်မာ စာအုပ်ပါ ရှာလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်.. သူ့အထဲမှာညွှန်းထားတာတော့ အကောင်းဆုံး Websites အခု ( ၁၈ ) လို့ပြောတာပဲ …နဂို မူရင်းရေးထားတဲ့သူကတော့ အခု ၂၀ ပါ.. ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အထဲက တချို့ ဆိုဒ်တွေကမရှိတော့လို့ ကျန်တာကလေးကိုပဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .. Free Ebook Download ပါ .. Free နော် Free .. 🙂 🙂 ကျွန်တော်တို့ တွေက Free ဆိုမှ စိတ်ဝင်စား ကြလို့ ကြေငြာပေးတာပါ…အဲဒီ့ ၁၈ ခုကတော့ အောက်မှာနော်… လိုလို မယ်မယ် ပေါ့ .. ကူးပြီးတော့ Save ရင် Save ထားလိုက်ပါ…
၁ ။ http://www.freebookspot.in
အဲဒီ့ဆိုဒ်မှာ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၉၆ ခု ရှိပြီးတော့ Free down လို့ရတဲ့ စာအုပ်ပေါင်း ၄ ထောင်ကျော်ရှိပါတယ် …
၂ ။ http://www.free-ebooks.net
၃ ။ http://manybooks.net
၄ ။ http://www.getfreeebooks.com
၅ ။ http://freecomputerbooks.com
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ပါတ်သတ်တာ ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် အထူး သင့်လျော်တဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုပါ.. ခေါင်းစဉ်ခွဲပေါင်း ၁၅၀ ရှိပါတယ် … ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာစာအုပ်တော်တော်များများ ကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ..
၆ ။ http://www.freetechbooks.com
၇ ။ http://www.scribd.com
ဒီဆိုဒ်မှာကလေးကိုတော့ တော်တော်များများ ရင်းနှီးမှာပါ … မြန်မာလိုစာအုပ်တွေကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် .. ဒါအပြင့် အဲဒီ့ ဆိုဒ်မှာ ကိုယ်ဖော်ပြချင်တဲ့ စာအုပ်ကို Upload တင် ပြီးရင် ကိုယ့် ရဲ့ Blog ပေါ်မှာ I-Paper နဲ့ ဖော်ပြနိုင်အောင် ခွင့်ပြုထားပါတယ် …
၈ ။ http://knowfree.net
၉ ။ http://www.onlinefreeebooks.net
၁၀ ။ http://www.memoware.com
၁၁ ။ http://www.zillr.org
၁၂ ။ http://www.onlinecomputerbooks.com
၁၃ ။ http://www.snipfiles.com
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်တွေ အပြင် Software တွေကိုပါ ရရှိုနိုင်ပါတယ်.. Software တွေကိုတော့ Free မရနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ် ..:)
၁၄ ။ http://www.bookyards.com
၁၅ ။ http://digital.library.upenn.edu/books
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာအုပ်ပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ် .. စာရေးဆရာ နာမည် စီးရီးနဲ့တောင် ရှာနိုင်ပါတယ် …
၁၆ ။ http://www.asksam.com/ebooks
၁၇ ။ http://www.baen.com/library
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပါ .. Science နဲ့စာအုပ်တွေကိုပါ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် …
၁၈ ။ http://www.ebooklobby.com
စာအုပ်တွေကို တော့ Online မှာ တခြားနေရာက ဆိုဒ်တွေမှာလည်း ရှာနိုင်ပါတယ် …ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း အဲဒီ့ ဆိုဒ်ကလေးကနေတွေ့လို့ သဘော ကျလို့ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် … ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ရှာတဲ့ အခါမှာ အကူအညီ ပြုမယ်ထင်ပါတယ် .. အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် …
REF : http://www.hongkiat.com
စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ပြည့်ဝသောသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ …
Read more: http://mglhulin.blogspot.com/2010/03/site.html#ixzz1eXoaexMj
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ Grammar-monster Business English Grammar Exercises
English Lesson Books
English Proverbs (2)